NCT Archives - Pop Channel
ယခုတစ်ခါမှာတော့ NCT U နဲ့ NCT 127 တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Doyoung ရဲ့ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားစေမယ့် အကြောင်းအရာတချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားလိုက်စားတဲ့မိသားစုကနေဆင်းသက်လာတဲ့ Doyoung Doyoung ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့…
Stock Pre-Orders 1 Million ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့ NCT ရဲ့ ‘RESONANCE Pt. 1’
NCT အဖွဲ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ ‘RESONANCE Pt. 1’ ကတော့ အဖွဲ့ရဲ့ Stock Pre-Orders စံချိန်မှာ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ SM Entertainment ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ…
(၂) နှစ်ကျော်အတွင်း ‘M Countdown’ ပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံးပြန်လည်ဖျော်ဖြေရမယ့် SM Entertainment ရဲ့ Group ဖြစ်လာမယ့် NCT U
NCT U ဟာ လာမယ့်တစ်ပတ်အတွက် ‘M Countdown’ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးမှာဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် NCT U ဟာ နောက်ဆုံး (၂) နှစ်ကျော်အတွင်း…
ပရိသတ်တွေသိထားသင့်တဲ့ NCT နှင့် SuperM ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mark ရဲ့ အကြောင်းအရာတချို့
ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ NCT နဲ့ SuperM ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Mark ရဲ့ ပရိသတ်တွေသိထားသင့်တဲ့အချက် (၆) ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Mark ရဲ့ကိုရီးယားနာမည် Mark ဟာ ကိုရီးယားမိဘနှစ်ပါးကနေမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး Canada…
Reality Show အသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်တော့မယ့် NCT
စက်တင်ဘာ (၂၄) ရက်နေ့မှာ OSEN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ NCT ဟာ ‘NCT WORLD 2.0’ ဆိုတဲ့ Reality Show တစ်ခုကို Mnet ပေါ်မှာပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။…
အယ်လ်ဘမ်အသစ်တစ်ခု ဖြန့်ချီဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ NCT
စက်တင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့မှာတော့ Star News ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ NCT ဟာ အယ်လ်ဘမ်အသစ်တစ်ခုကို အောက်တိုဘာထဲမှာဖြန့်ချီဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ SM Entertainment က ယခုလိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ “NCT…
Taeyong နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထွက်ရှိနေတဲ့ Rumor တွေအတွက်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ SM
NCT အဖွဲ့ဝင် Taeyong နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ကောလာဟလသတင်းတွေကိုဖြန့်ချီနေတဲ့အပေါ် SM Entertainemnt ကယခုလိုတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “ဒီကြေညာချက်ဟာ Taeyong နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ကောလာဟလသတင်းတွေ Online ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အပေါ်…
Taeyong ကိုအဖွဲ့ထဲကထုတ်ပယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ ပရိသတ်များ
NCT ရဲ့ပရိသတ်တချို့ဟာ Korea Community Website တွေဖြစ်တဲ့ Instiz နှင့် Jjukbang Cafe ပေါ်ကနေတဆင့် Taeyong ကို NCT Group ထဲကထုတ်ပယ်ပေးဖို့…
Jaehyun တစ်ယောက် Itaewon သွားခဲ့တာကို အတည်ပြုလိုက်တဲ့ SM entertainment
April 25 ရက်နေ့မှာ Jaehyun ဟာ Itaewon club ကိုသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို SM entertainment ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီး၊ Jaehyun ရဲ့အပြုအမူအတွက်လည်းပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ “ယခုလို COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ…